musha Europe Vatambi veBasketball Rudy Gobert Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Chinyorwa chedu chinokupa chinyorwa chizere cheRudy Gobert Hupenyu hweMwana, Biography, Hupenyu Hwemhuri, Vabereki, Upenyu hwepakutanga, Mararamiro, Musikana, Hupenyu hwepamwe uye humwe hunoshamisa Biography Chokwadi kubva paakanga ari mwana kusvika pakuzivikanwa.
Hupenyu nekusimuka kwaRudy Gobert;
Hongu, munhu wose anoziva ndiye wekutanga NBA mutambi kuwanikwa aine coronavirus vanozivawo saCovid-19. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Rudy Gobert's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Rudy Gobert Zvehucheche Nhau:
Imwe yemifananidzo yekutanga inozivikanwa yehuduku yaRudy Gobert. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Kutanga, Rudy Gobert-Bourgarel akazvarwa musi wa26 Chikumi June 1992 pamusangano weSaint-Quentin muFrance. Ndiye ega mwana akaberekwa mumubatanidzwa pakati paamai vake ,Corinne Gobert nababa vake, Rudy Bourgarel.
Kutenda kuberekwa kwevabereki vevacacial muFrance, Rudy imhuri yechiFrench yemadzinza akasanganiswa nemidzi yemhuri yeAfrica. Wakanga uchiziva here kuti akakurira pakuzvarwa kwake muSanta-Quentin iri kuchamhembe kweParis?
Mufananidzo usingawanzoitika waRudy Gobert achikurira kuSaint-Quentin muFrance.
Kukura kuSaint-Quentin, Rudy aingova 3 chete makore chete vabereki vake pavakasiyana nzira. Kutevera Rudy Gobert kurambana kwevabereki, ramangwana NBA nyeredzi yakarererwa naamai kuSaint-Quentin. Bourgarel (baba vaRudy) vairamba vachichengeta tabo nemwana wavo zvekutanga hupenyu zvido.
Rudy Gobert Mhuri Yemhuri:
Imwe yehupenyu hwaRudy hwepakutanga kwaive kutamba basketball, mutambo waiitwa nababa vake padanho rehunyanzvi. Nekudaro, Bourgarel aive nezvimwe zvikonzero zvekuve padhuze nemwanakomana wake aine chinangwa chekumudzidzisa mubasketball.
Kune iye chikamu, amai vaRudy Corinne vaive mucheki wevhudzi kune hwese hudiki hwake. Saamai vasina murume, akashanda nesimba kuti awane zvaidiwa naRudy pamwe neizvo zvehama yake nehanzvadzi (yakazvarwa kuna baba vakasiyana).
Sangana nevabereki vaRudy Gobert. Mifananidzo Credits: Instagram.
Rudy Gobert Dzidzo:
Parakazosvika Rudy aine makore gumi nematatu ekutanga, akatanga basa rake rekuvaka mubhasiketi paJSC St-Quentin kirabhu. Yakanga iri kukirabhu yevakomana iyo yaakatora matanho ake ekutanga mumakwikwi e basketball.
Ona uyo akatanga kutora basketball zvakakomba kubva panguva ye11.
Rudy achiri pazviri, akashinga kurota kuti mutambo uyu uchamutora kusvika papi asi zvakadaro, akacherechedzawo dzidzo yake yezvechikoro yaaiziva kuti inogona kuunza zvikoro zvepamusoro mubhasiketi uye pakoreji basa mumutambo.
Rudy Gobert Makore Ekutanga muBhasiketi:
Fortunate yaRudy, aisafanirwa kupfuura nemumatambudziko echikoro chepamusoro bhasiketi kuita uye kukoreji basa nekuti akapedza nguva yakawanda achitamba kuSaint-Quentin BB kirabhu mu2007 asati awana nzvimbo kuCholet Basket youth academy mu2010.
Wakamboona uyu pikicha weiyo panguva iyoyo basketball prodigy mukuita kweCholet Basket?
Kubudirira kwake kwekutanga nezvikwata zvecadet zveCholet Basket zvinosanganisira kuve chimwe chechigadzirwa chechikoro chekutamba nechikwata chenyika cheFrance pasi pemakore gumi nemasere kuFIBA Europe Under-18 Championship. Chii chimwe? mukwikwi uyu wakamuona achibuda semutambi akanyatsonaka wechiFrench Team.
VERENGA Kyrie Irving Nyaya Yevamwe Vana Plus Untold Biography Facts
Rudy Gobert Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kuchinja kwebasa raRudy mubhasikiti kwakauya paakasarudza kuzivisa iyo NBA dhizaini muna 2013. Aive 7-tsoka-1 inches panguva iyoyo uye aive aine mbiri rekodhi & hunyanzvi hwekumuita kuti arove NBA zvikwata seyakanaka sarudza. .
Nekuda kweizvozvo, zvaisashamisa kuti VaDenver Nuggets vakasarudza Rudy ane makore makumi maviri nerimwe aine makumi maviri neshanu sarudzo asi vakamupa kuUtah Jazz muchibvumirano chekutengeserana nehusiku hwechinyorwa.
Rudy Gobert Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
Paasayina chibvumirano chake che rookie neUtah Jazz, Rudy akaitwa kuti atange kutamba mu 2013 NBA Summer League. Akaita zvakanaka kufadza nekurova mushe-yakakwira mapoinzi gumi paakanangana neOklahoma City Thunder mumutambo wake wechigumi nemaviri weJazz.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Rudy Gobert's Biography, Rudy ane - pakati pezvimwe zvakaitwa, - akaita zvakanaka kuti akunde iyo NBA Kudzivirira Player Player wegore mibairo yekudzoka-kumashure mu2018 na 2019.
Kune vatambi vashoma kwazvo vakakunda iyo NBA Dziviriro Player yeGore kaviri. Rudy akaita yake yekudzokera-kumashure.
Kugadzira All-NBA Team runyorwa muna 2017 na2019 ndomumwe mutambo usingazombopokana unoita Rudy Gobert nhengo dzemhuri, kunyange zvakanyanya, prouder nezve iyo chaiyo. Vashoma kuti vaisaziva kuti imwe nzira yekuzivikanwa yaiuya kuna Rudy kune yakaipa mweya yezvinhu.
Padivi rinotyisa rezvinhu, mudzvanyiriri akadzivirira akatora tarisiro yepasirese mushure mekunge aedza hutachiwona hunonzi Covid-19. Iyi kuvandudzika yakaita kuti NBA irimise mwaka we 2019-20 nguva isingaperi.
Vafambi uye nenyika yese vanobatana naye mumifungo uye neminamato sezvavanotarisira kuti achapora munguva pfupi. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ndiani Rudy Gobert Musikana Musikana?
Murefu, akafara uye akanaka Rudy Gobert anofanira kunge ari pane chishuwo chinyorwa chemukadzi wese akamutarisa (kunze kwamai vake nehanzvadzi). Nekudaro, iyo genius yebhasikiti ichiri kuzoonekwa nemukadzi anogona kunzi musikana wake.
Mukuwedzera, Rudy haana mukadzi kana Mwanakomana (s) uye mwanasikana (s) kunze kwemuchato. Kune zvese zvatinoziva, Rudy haana kuroora panguva yekunyora nezvikonzero zvisiri kure nekubatanidza pane zvake zvakapfuura zvaakaita mu basketball sezvo achitarisira kuzadzisa zvimwe.
Rudy Gobert anotsvaga kuwana zvakawanda kunyangwe asina musikana.
Rudy Gobert Hupenyu Hwemhuri:
Kana zvasvika kune basketball, mhuri haina kukosha kune vatambi vehunyanzvi vemutambo. Izvo zvinhu zvese kwavari. Muchikamu chino, tichakuunzira chokwadi pamusoro paRudy Gobert nhengo dzemhuri kutanga nevabereki vake.
VERENGA Joel Embiid Diki Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Nezve Rudy Gobert Baba:
Baba vaRudy - Rudy Bourgarel mutambi wenguva-imwe bhasiketi mutambi uyo akaberekerwa kuGuadeloupe, France. Bourgarel akakosha ebasketball mabatiro akatanga nekutamba kuMarist koreji muNew York asati aenda pro. Akave nebudiriro yebasa yakati wandei inosanganisira kuita kutaridzika kwechikwata chenyika yeFrance muma1980.
LR Rudy Bourgarel achitamba koreji basketball yeMarist uye kuva nenguva yakanaka nemwana Rudy ..
Nekudaro, akatadza kuona zviroto zvake zvekutamba muNBA. Nekuda kweizvozvo, Bourgarel akarwisa kuti ave nechokwadi chekuti mwanakomana wake akazviita kune rakakurumbira renyanzvi yehunyanzvi bhasiketi nekumupa mazano nekumutsigira munzira yese.
Nezve Rudy Gobert Amai:
Amai vaRudy - Corinne Gobert ari kupokana munhu wepamoyo pane moyo wake. Aive Corinne uyo wehunyanzvi hwebasketball akanamira nekutevera vabereki vake akapatsanurwa uye iye anozivikanwa kuve aigara aripo pazviitiko zvake zvehupenyu kunyange husiku hweiyo NBA yekunyora.
Taura nezvekwakabva mhuri yake, Corinne mukadzi muchena ane midzi yeFrance, chiitiko chinotsanangura kuti sei Rudy ari wepamoyo.
Rudy Gobert achiva nenguva yakanaka naamai vake. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
About Rudy Gobert's Vana vehama uye Hama:
Kufamba kubva pachokwadi pane vabereki vaRudy Gobert, basketball Genuis akamboratidza kuti ane hama nehanzvadzi dzakazvarwa kuna baba vakasiyana. Hazvisi zvakawanda zvinozivikanwa nezve hafu-hama nevanasekuru-baba vake.
Kana zvinyorwa zvavo zvedzinza raRudy kunyanya zvinechekuita nasekuru nasekuru vake. Saizvozvowo, panguva yekunyora Rudy Gobert's biography, vanatete vake, babamunini, babamunini, babamunini, vazukuru nanasekuru havasati vazivikanwa.
Rudy Gobert Hupenyu hweMunhu:
Chii chinoita kuti Rudy Gobert akanganise uye nezvehunhu hupi hunhu hwake uye kuita kunze kwematare e basketball? gara kumashure apo isu tichikuunzira chokwadi nezve magadzirirwo aGobert's Persona ayo akafanana neevamwe vanhu vane zodiac chiratidzo cheCancer.
Iye anozvininipisa, anotamba, ane moyo wakangwara, anoda chinzvimbo, haatyi uye akavhurika nekuratidzira chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwepachivande. Zvaanofarira nezvaari kuita zvinosanganisira kuona mabhaisikopo, kushambira, kuteerera mimhanzi, kutamba puru uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake neshamwari.
Anotamba dziva rekuvaraidza. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Rudy Gobert Mararamiro:
Waizviziva here kuti fungidziro yeRudy Gobert mambure akakosha ndeye 32,7 Miriyoni emadhora panguva yekunyora? huwandu hwepfuma yemutambi hunobva mukuedza kwake basketball apo vamwe vanotora chimiro chekubvumidzwa. Zvakadaro, bhasiketi anorarama hupenyu hwoumbozha nekushandisa zvakasununguka pasina kutya kwekutyorwa.
Izvi zvinoonekwa nemabatiro aanokwira majee akavanzika kuzviitiko nemabasa. Uye zvakare, Judy anofamba mumigwagwa yeSalt Lake City muUtah mumotokari dzekunze apo pasina kukahadzika kuti imba yaanogara muUtah ndeyekukosha kwakanyanya.
Haisi nguva yose yaunoona vatambi vebhasiketi vanokwenenzvera jets dzega sezvaanoita. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram.
Rudy Gobert Chokwadi:
Kuputira yedu Judy Gobert yehucheche uye biography, heano zvishoma zvinozivikanwa kana zvisingataurike chokwadi pamusoro pe basketball genius.
Chokwadi #1- Coronavirus Joke Kuenda Zvakaipa:
Zvese zvakatanga kuita sejesi riri nyore iro rakazoita rinodhura. Izvi zvakaitika. Asati asiya musangano wekubvunzurudza, Rudy Gobert akaseka akabata matepi ose akaiswa pamberi pake patafura. Akaita izvozvo senge nzira yekujairira nezve Coronavirus asingazive kuti anayo. Tarisa vhidhiyo pazasi!
Chokwadi #2 - Chitendero:
Judy haanamati uye achiri kupa zviratidzo pamusoro pezvaaitenda pakunyora. Pamusoro pezvo, haana kutaura kana kufamba zvinomupa seusingatendi. Nekudaro chimiro chake chezvinhu zvekutenda chiri pane imwe nzvimbo pakati pekuvanzika uye kutarisa kwekutamba basketball.
Chokwadi #3 - Tattoos:
Kusiyana nevakawanda venyeredzi dzeBasketball, Judy haana ma tattoos, uye vateveri havana ma tatto avo panguva yekunyora. Iye mudiki bhasiketi ari pane rugare nerunyararo rwake uye kukwirira kwe7 metres 1 inch.
Chimwe chezvidimbu zvisingawanzo zveuchapupu hwekuti haana ma tattoo panguva yekunyora. Image Chikwereti: Instagram.
Chokwadi # 4 - Trivia:
Gore rekuzvarwa raJudy - 1992 rine kukosha kwezvematongerwo enyika, tekinoroji uye runyararo. Wanga uchiziva here kuti raive gore iro Bill Clinton akazova mutungamiri apo Microsoft yakaburitsa Windows 3.1? Uye zvakare, 1992 raive gore iro iro hondo inotonhora yakaunzwa kumagumo. Igore rinokosha zvakadini!
Chokwadi # 5 - Nezve zita raRudy:
Havasi vazhinji vanoziva kuti Rudy akapihwa zita remadunhurirwa rekuti - “Shongwe Inobira” nekuda kwekuti akaisa zvinyorwa zve 7 tsoka 8 feet inches uye 9 tsoka 7 inches akamira anosvika panguva yekutora kwake mu2013 NBA Dhizairo Unganisa.
Rudy Golbert Biography Pfupiso:
Rudy Gobert Biography Chokwadi
Zita rizere: Rudy Gobert-Bourgarel.
Zita rekudanwa: Iyo Stifle Shongwe.
Akazvarwa: 26 Nyamavhuvhu 1992 (zera 27 sekuna Kurume 2020), Saint-Quentin, France.
Vabereki: Rudy Bourgarel (Baba) naCorinne Gobert (Amai).
Dzidzo: Marist College
kukwirira: 7 ft 1 mu (2.16 m)
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Rudy Gobert Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!